लखन थापाभन्दा ३६ वर्षअघि मारिएका थिए तुले रोहानी : को हुन् तुले रोहानी ? | Investopaper
लखन थापाभन्दा ३६ वर्षअघि मारिएका थिए तुले रोहानी : को हुन् तुले रोहानी ?
धुर्वसागर शर्मा , रासस । असाैज २०, २०७७
विसं १८९७ मा म्याग्दीको पाखापानीमा ठूलो विद्रोह भएको थियो । चौबिसी राज्यअन्तर्गत पर्ने पर्वत राज्य गोरखामा विलय भएपछि गोरखाली शासकले पर्वतमा मनपरी गर्न थाले । पाखापानीको तुल्चेङ गाउँका ९० वर्षीय हर्कदेउ पूर्जाका अनुसार गोरखाले पर्वतमाथि विजय गरेपछि युद्धमा बाँचेका पर्वत राज्यका राजा, राजकुमार तथा राजपरिवारका सदस्यहरु भागेर काँसी (भारत) गएका थिए ।
उनीहरु भारतमा रहनुलाई तत्कालीन गोरखा राज्यले आफूविरुद्ध जुनसुकै बेला पनि षडयन्त्र हुनसक्ने सम्भावित खतराका रुपमा लियो । उनीहरुलाई काँसीबाट फिर्ता बोलाई लोभलालच र सुविधा दिएर पहिलाको पर्वत राज्यमा नै राखियो ।
तत्कालीन पर्वत राज्यका शासकहरुले त ज्यान बचेको र सेवासुविधा पाएकामा चित्त बुझाए तर सामान्य जनताको भने बेहाल थियो । राज्यलाई आम्दानीभन्दा दश गुणा बढी कर तिर्नु पर्दथ्यो । जनताका तरुनी भएका छोरीहरु शासकलाई जिम्मा लगाउनु पर्दथ्यो । सुविधा केही थिएन । सामान्य मुद्दा मामिलाका लागि पनि बागलुङ वा तानसेन (पाल्पा) पुग्नु पर्दथ्यो । यी सबै कुरा व्यहोर्नु पर्दा तुले रोहानीको मनमा तत्कालीन गोरखा राज्यविरुद्ध विद्रोह उत्पन्न भयो ।
हर्कदेउ पूर्जाले सुनाएको किंवदन्तीअनुसार ढोलठाने राजकुमारहरुले तरवारका साथै ठेकीमा गाइको दूध पनि लिएर आएका थिए । संयोगवश तुले रोहनीसँगको लडाइँमा आफू मारिने अवस्था आयो भने गाईको दूध मुखमा परोस् र परलोक सुधारियोस् भन्ने आशयले उनीहरुले दूध पनि सँगै ल्याएका भन्ने कथन छ । लडाइँमा जब जेठा राजकुमारले तरवारले तुले रोहानीको शिर छेदन गरे ठेकीको दूध छचल्किएर तुले रोहनीको छिनिएको टाउकामा प¥यो । गोरखाली पक्षका सेना, कर्मचारी र त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएका तालुकदार, जिम्मुवाल, भद्रभलादमी र तुले रोहनी पक्षका सिपाही र लडाकुहरु पनि छक्कै परे ।
रोहानी मारिएपछि पाखापानी गाउँका स्थानीयवासीको सुरक्षा जोखिम बढ्यो । गोरखाली पक्षले त्यहाँका स्थानीयवासीलाई खोजी खोजी मार्न थाल्यो । गोरखाली सैनिक र उसका पक्षका मानिसले मनपरी गर्न थाले । गोरखाली पक्षबाट बचेका व्यक्तिहरु भागे । धेरै पछिसम्म पनि गोरखाले पाखापानीमा निगरानी राखिरह्यो । भागेर अन्यत्र गएका मानिसहरुले गोरखाली पक्षको तारो बनिन्छ भनेर रोहानी थर नै परिवर्तन गरे । अहिले पनि पाखापानीमा मात्रै होइन देशैभरिका मगर समुदायमा रोहानी थर नभेटिएको इतिहासकार बानियाँले बताउनुभयो । यसरी तत्कालीन शासकको विरुद्ध विद्रोह गर्दा तुले रोहानी शहीद मात्रै बनेनन् मगर समुदायको एउटा थर नै लोप भएर गयो ।
तुले रोहानी मारिएको १८० वर्ष भइसकेको छ । हाल पाखापानीका सबैभन्दा जेठा व्यक्ति हर्कदेउ पूर्जा हाल ९० वर्षका हुनुहुन्छ । पूर्जाले आफ्ना बुबा सकबहादुर पूर्जाबाट पाएको जानकारीअनुसार तुले रोहानी हठी स्वभावका, कसिलो शरीर भएका, ३० वर्ष भित्रैका, होचो कद र श्यामवर्णका थिए ।उनी अन्याय नसहने र कसैसँग नडराउने स्वभावका थिए । उनले त्यतिबेलाका पात्लेखेत र झीँ गाउँमा रहेका भलादमीहरुलाई मन पराउँदैनथे । ती गाउँका गन्यमान्य भनिएका जिमुवाल, मुखिया वा गोरखा राज्यका अन्य कारिन्दाहरु सधैँ रोहानीलाई दुःख दिइरहन्थे ।
हर्कदेउ पूर्जा भन्नुहुन्छ, “मैले सुनेअनुसार तुले पाइजा (तुलु राजा) ले पाखापानीमा शासन नै गर्न पाएनन् । राजा बनेको केही समयमा नै उनी गोरखे सरकारबाट मारिए ।” पूर्जाको विश्वास छ, “आफ्ना गाउँलेमाथि भएको अन्याय सहन नसकेर गोरखे सरकारसँग लड्ने तुुलु राजाले राज्य गर्न पाएको भए पक्कै पनि जनतालाई सुख दिन्थ्यो होला ।” त्यसैगरी कोटगाउँका ७२ वर्षीय गौबहादुर शेरबुजाले सुनेअनुसार तुले रोहानी रिसाहा र बलिया थिए । उहाँले भन्नुभयो “डाँकोको भरमा गाउँलेलाई कजाउन सक्थे रे । अन्याय पनि नगर्ने र नसहने उनको बानी थियो भन्ने सुनेको हो ।”
कोटगाउँकै अर्का स्थानीय दलप्रसाद शेरपुंजाले सेवा र सुन्दर दुई भाइ भएका र सोलीडोली चलाउनका लागि भाइ सुन्दरलाई पाइजा थर दिई कोटगाउँबाट पाखापानी पठाएको र तुले रोहानी (पाइजा) पनि सुन्दरकै आठ पुस्ते सन्तति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “लिखित इतिहास केही पनि छैन, सुनेकै भरमा थाहा पाउने हो, हामीले सुनेअनुसार त तुले पाइजा गोरखाली सेनाबाट मारिएका हुन् ।”
साहित्यकार तथा पर्वत राज्य बारेको अनुसन्धाता चन्द्रप्रकाश बानियाँका अनुसार आजभन्दा सवा दुई सय वर्षअगाडि बेनी बजारमा एउटा ठूलो रक्तरञ्जित काण्ड भएको थियो । विसं १८४३ असोज ४ गते पाल्पा र गोर्खाको संयुक्त फौजले पूर्व र दक्षिण दिशाबाट एकैसाथ पर्वतको राजधानी शहर बेनीमा आक्रमण ग¥यो । त्यहाँ दश दिनसम्म भीषण युद्ध चल्यो ।
धर्मशास्त्रले पनि हिंसा निषेध गरेको पितृ पक्ष (सोह्र श्राद्ध) को बेलामा बेनीको पावन भूमिमा रक्तपात मच्चियो । सयौँ मानिसको ज्यान गयो । दर्जनौँ पर्वते भाई भारदार र योद्धाहरु खोजी खोजी मारिए ।
स्थानीयका र सरकारी धन सम्पत्तिमा पनि व्यापक लुट मच्चाइयो । गोर्खाले लडाईँ जित्यो । पर्वतले युद्ध हारेको मात्रै होइन, तीनसय वर्षको गौरवमय इतिहासको पटाक्षप भयो । समालवंशी राजवंश विस्थापित भयो । पर्वतको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त भयो । दश दिन लामो युद्धपछि विसं १८४३ असोज १४ गते पर्वत राज्य गोर्खामा विलयको घोषणा भयो । यसरी बेनीस्थित पर्वत राजप्रासादमा गोर्खाली झण्डा गाडियो ।
← प्रदेश राजधानी देउखुरीका विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको ह्विप
अब प्रदेश नं ५ काे नाम लुम्बिनी प्रदेश र राजधानी देउखुरी →